Fandikan-dalana amin’ny fifidianana :: Hanampy an’ireo mpitory amin’ ny fanangonana porofo ny FES • AoRaha
Fandikan-dalana amin’ny fifidianana Hanampy an’ireo mpitory amin’ ny fanangonana porofo ny FES
Hofenoina ireo fepetra takian’ny lalàna. Hanampy an’ireo mpitory amin’ny fanangonana an’ireo porofo manoloana an’izay fandikan-dalàna mety hitranga mandritra ny fifidianana kaominaly hatao amin’ny 27 novambra ny fikambanana Friedrich Ebert Stiftung Madagascar (FES).
Hiaraka hiasa amin’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana isaky ny faritra koa izy ireo mba hahafahana mampanara-dalàna an’ireo antontan-taratasy fitoriana ka hahatonga an’izany ho raisin’ny Fitsarana.
Eo am-panatanterahana atrikasa hoentina mamaritra an’ireo dingana rehetra tsy maintsy arahin’ny mpitory ny roa tonta, amin’izao fotoana izao. Havoakan’izy ireo anio ireo fehin-kevitra avy amin’ity atrikasa hatao etsy amin’ny Louvre Antaninarenina ity.
Nohazavain-dRina Ranaivo Harisoa, mpiandraiki-draharaha ao amin’ny FES, fa: “hoezahina hamoraina ny fangatahana an’ireo didi-pitsarana mba hahitana hoe inona marina no antony nandavana ny fitoriana iray. Efa mankaleo ny olona maro ny maheno ny valin-tenin’ny Fitsarana ka mba hialana amin’izany no hanoroana an’ireo mpitory amin’ny dingana rehetra harahina rehefa hitaraina amina trangana tsy fahatomombanana mandritra ny fifidianana izy ireo”.
Fitsarana olom-panjakana ambony Efa naharay fitoriana am-polony an’ireo minisitra teo aloha ny HCJ